मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना, कुन प्रदेशमा कस्तो ? – Interview Nepal
मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना, कुन प्रदेशमा कस्तो ?
काठमाडौँ, फागुन १४ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज र भोलि देशका पहाडी भेगमा मेघगर्जनसहित वर्षाको पूर्वानुमान गरेको छ ।
आज दिउँसो पहाडी भू(भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्टयाङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।